JTBC – Networks – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Good Detective (2020) Complete Unicode ၂၀၁၅ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ မနက်၃နာရီကြီးမှာ တန်ဖိုးကြီးနာရီတစ်ခုဝတ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကို တံတားပေါ်ကနေပစ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာတော့ တကယ့်တရားခံအစစ်မဟုတ်ပဲ လီဒယ်ချောဆိုတဲ့သူဖြစ်နေပြီး အပြစ်မရှိပဲနဲ့ ကြိုးမိန့်ပေးခံလိုက်ရပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေပြီးလို့ ငါးနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီအမှုနဲ့ ဆက်စပ်ဆင်တူတဲ့ကိစ္စတွေကပြန်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီလိုကိစ္စတွေကို လီဒယ်ချောလူသတ်မှုကိုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ စုံထောက်ဂန်ဒိုချန်းနဲ့ ဆိုဘူရဲစခန်းကိုအသစ်ရောက်လာတဲ့ စုံထောက်ဂျီအိုဟျော့တို့က ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြမှာလဲ?? လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ကလူသတ်မှုရဲ့တရားခံကိုဘယ်သူတွေကဖုံးကွယ်ပေးလိုက်ကြတာလဲ?? တကယ့်တရားခံကရောဘယ်သူလဲ?? စတာတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်မြင်တွေ့ရမယ့် series တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ Kdrama fanတွေရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီး Son HyunJoo က ဂန်ဒိုချန်းအဖြစ်ပါဝင်ထားပြီးတော့ဂျီအိုဟျော့ နေရာမှာတော့ Encounter(Boyfriend)ထဲကဒုတိယမင်းသားနေရာကနေ စိတ်ဝင်စားမှုတွေရရှိထားတဲ့ Jang Seung-jo ကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Jen ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ မနက္၃နာရီႀကီးမွာ တန္ဖိုးႀကီးနာရီတစ္ခုဝတ္ထားတဲ့လူတစ္ေယာက္က ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕အေလာင္းကို တံတားေပၚကေနပစ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းဖမ္းခံရတဲ့အခါမွာေတာ့ တကယ့္တရားခံအစစ္မဟုတ္ပဲ လီဒယ္ေခ်ာဆိုတဲ့သူျဖစ္ေနၿပီး အျပစ္မရွိပဲနဲ႔ ႀကိဳးမိန္႔ေပးခံလိုက္ရပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြၿပီးလို႔ ငါးႏွစ္ၾကာတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီအမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ဆင္တူတဲ့ကိစၥေတြကျပန္ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုကိစၥေတြကို ...